Shiinaha Dog Rakoobo leh Hood jaakada biyuhu biyuhu u warshado waaweyn iyo soo saarayaasha | Ihome
Faahfaahinta alaabta Waxay u da'ayaan roobab badan xagaaga iyo roobabka xilliyada qaarkood. Way ku adag tahay milkiileyaasha xayawaanka, maxaa yeelay eeyaha maahan inay maalin walba u soo baxaan si ay u nastaan ​​laakiin waa inay la macaamilaan saxarada iyo kaadida banaanka, sidaas darteed, si loo qanciyo rajada eeyaha inay bixi karaan maalmaha roobka, milkiilayaasha xayawaanku waxay u diyaariyaan dhammaan noocyada buskudka xayawaanka rabaayadda ah, qaar iyaga ka mid ahi runtii waa wax lagu qoslo. 1.Ku dabool lugaha koodhka roobka Faa'iidada daboolida lugaha lugaha roobka: nooca rooga ayaa dabooli kara inta badan eeyaha, ugu badnaan wuxuu ka hortagi karaa eeyaha inay qoyaan ....
Roobab badan ayaa xagaaga da'a oo da'a xilliyo kala duwan.Waa wax aad ugu adag milkiilayaasha xayawaanka. Sababtoo ah eeyaha maahan inay maalin walba u soo baxaan si ay u nastaan ​​laakiin sidoo kale waa inay la macaamilaan saxarada iyo kaadida banaanka. maalmaha roobka, milkiilayaasha xayawaanku waxay u diyaariyaan dhammaan noocyada jaakadaha roobka ee xayawaanka rabaayadda ah, qaar iyaga ka mid ahi runtii waa wax lagu qoslo.
1.Ku dabool koodhka roobka
Faa'iidada daboolida lugaha lugaha roobka: nooca rooga ayaa dabooli kara inta badan eeyaha, ugu badnaan wuxuu ka hortagi karaa eeyaha inay qoyaan.
Sababta oo ah milkiilayaasha badankood waxay isticmaalaan shukumaanada waxay engejiyaan eeyahooda boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan ka dib markay soo saaraan.Si kastaba ha noqotee, habka noocan oo kale ah wuxuu waxyeello weyn u leeyahay caafimaadka eyda. .
Faa'iido darrida daboolida lugaha dharka lugaha: nooca roobaadka noocan ah badankood waxay leeyihiin sagxad adag oo ah lugta surwaalka Marka marka ugu horeysa ee xiran ma noqon karto mid aad ugu raaxeysan kara eeyaha iyo waxoogaa caqli-gal ah oo lagu socon karo Laakiin tani way fiicnaan doontaa ka dib markay la qabsadaan.
Koodhka roobka nooca Cape
Faa'iidada nooca joodariga roogga: ku habboon in la xidho, eeyaha way fududahay in lala qabsado.
Faa'iido darrada nooca jubbadda roogga: caloosha iyo addimada waa la soo bandhigayaa, si fudud ayey u qoyaan roobeed, marka laga soo tago, markii dabayl xoog leh gadaal ka dhacdo, joodhka roobku waa sahlan yahay in la qarxiyo, tani waxay sidoo kale kordhisay fursadda ah inay qoyaan.
Marka loo eego faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka laba nooc oo roogga ah: hase yeeshe waxay kugula talineysaa inaad daboosho nooca lugaha, in kasta oo eyda aan laga soo qaadaynin bilowga. Waqti yar uun baa la siiyaa, marwalba way la qabsadaan.
1. Koodhka roobka eey ee leh daboolka waa mid aad u fudud, culeysna kuma leh eeyga.
2. Daboolka iyo dhabarka waxaa ku yaal karbaallo milicsiga leh, markaa waa ammaan marka eeygu mugdiga ku dhex ordo dharka eyga roobka oo wata godka suunka.
Dahaarka mesh waa neefsasho, eeygu wuxuu dareemi doonaa raaxo.
4.Eyga roobaatka biyaha diidan ee biyuhu waxay ka samaysan yihiin dhar waara, waa isku laaban yahay oo la qaadan karaa.
Waxay ku tirtiri kartaa dusha sare ee jaakada roobka maro qoyan.
Haddii jaakada eyga ay aad u wasakh badan tahay, waa mashiin la dhaqi karo. Fadlan ku dhaq tartiib tartiib ah biyo qabow oo laalaadi qalalan.
Midab: Buluug / Casaan
Cabir: 3XL: 19in * 24in * 17in (dherer * laabta * qoorta)
4XL: 23in * 30in * 21in (dherer * laabta * qoorta)
5XL: 27in * 36in * 23in (dherer * laabta * qoorta)
3XL: 50cm * 61cm * 45cm (dherer * laabta * qoorta)
4XL: 60cm * 78cm * 55cm (dherer * laabta * qoorta)
5XL: 70cm * 92cm * 59cm (dherer * laabta * qoorta)
Jilibka eyda oo lagu tirtiri karo maro qoyan, Buluugga biyaha aan caadiga ahayn ee balastarka polyesterka ah, Biyo-mareenka dharka-biyaha celiya ee dharka-biyaha, Soosaaraha dharka mashiinka jumlada ah ee dharka lagu dhaqo, Bixiye roogga xayawaanka ah, Jiilaal yar oo ey ey ah, roogga eyga noocyada waaweyn. dhar diiran oo ey weyn oo daboolan oo daboolan, poncho rooke ah oo xayawaan ah oo dhexdhexaad ah, poncho xayawaan rookeedu weyn yahay, 3X-xayawaan roobaato waaweyn, 4X-xayawaan roobaato waaweyn, 5X-xayawaan roobaato waaweyn.
Hore: Dhalada silikoon eeyaha Dhalada Weelka Cuntada la qaadan karo
Xiga: Dog Collar Red Plaid Tartan Pet Bow Tie Collars
Xayawaanka Neckerchief siyaada S ...
Dog Ciyaar Dog Rugby B ...